Kodzero-dzevanhu, 03 Nyamavhuvhu 2019
Nyamavhuvhu 03, 2019
Chirongwa Chekurangarira VaItai Dzamara Choparurwa neMusi weChitatu muHarare
VaItai Dzamara vaive mutori wenhau akasiya basa rekutora nhau achiti ava kurwira kodzero dzevanhu kudzamara hurumende yeZanu PF, pamwe nemutungamiri wayo panguva iyi, VaRobert Mugabe, vasiya basa.
Zesn Inoti Sarudzo yeLupane East By Election Yaitwa Murunyararo
Mukuru webazi rinoongorora kufambiswa kwesarudzo muZesn, Va Ian Goredema, vanoti by election yekuLupane East yaitwa murunyararo, uye sangano ravo rafara nemabatirwo aiitwa basa neZimbabwe Electoral Commission.
Nhengo dzeParamende Dzodziswa Zvinoreva Bhiri reMutemo weKuroorana
Nhengo dzeparamende dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rezvewanano kana kuti Marriages Bill dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji.
ZCTU Inoti Haina Kufara neHurongwa hwaVaMthuli Ncube hweKufambiswa kweMari
Sangano revashandi reZimbabwe Congreess of Trade Unions, ZCTU, rinoti harisi kufara zvachose nehurongwa hwemafambisirwo emari uye kuwedzerwa kwemari yebhajeti rakaturwa negurukota rezvemari, Muzvinafundo Mthuli Ncube, nemusi weChina.
Retired Major General Sanyatwe Votemerwa Zvirango neAmerica
Hurumende yeAmerica nhasi yatemera zvirango zvekufamba Retired Major General Anselem Nhamo Sanyatwe nemudzimai wavo Amai Chido Machona-Sanyatwe vanove nhengo yeparamende inomirira Nyanga North mudare reparamende.
VaNcube Vanoti Mutengo weMagetsi Wakwidzwa Mubhajeti Ravatura
Gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, vaparura hurongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende hwemabhiriyoni gumi nemasere ane mazana matanhatu nemakumi maviri ezviuru zvemadhora emaRTGS.
Zimbabwe Inocherechedza Gore Vanhu Vairatidzira Vaurayiwa neMauto Gore Rapera
Zimbabwe yacherechedza gore rimwe chete mushure mekuurayiwa kwevanhu vatanhatu nemauto, vamwe vakawanda vachikuwadzwa, zvichitevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika musi wa 01 Nyamavhuvhu gore rapera.
VaChasi Vanoti Hurukuro neEskom Dzichiri Kuenderera Mberi paNyaya yeMagetsi
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto VaFortune Chasi vanoti hurukuro nekambani yeESKOM yekuSouth Africa panyaya dzekuti Zimbabwe itengeserwe magetsi dzichiri kuenderera mberi.
Vari Kunze Vochema neKwavanoti Kusatirimuka kweHurumende paNyaya yeMapasipoti
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvikuru zviri kunze kwenyika zviri kunyunyuta zvakasimba nekwazvinoti kukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa matsva kana kumutsiridza anenge apera kushanda, izvo zvave kuita kuti vamwe vavo varasikirwe nemabasa.
Mashoko aVaMpofu naVaMatema Okonzera Mutauro paNyaya yeGukurahundi
Komishina neNPRC, Amai Netty Musanhu, vabvuma kuti mashoko anotaurwa nevamwe vakuru vakuru anogona kukanganisa chimiro cheNPRC uye kuita kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende.
Madhokotera Anoti Rubatsiro rweHigher Life Foundation Harwupedzi Matambudziko Ari Muzvipatara
VaMnangagwa Vanoti Madhokera Ari Kuramwa Mabasa Awo Ari Kubhadharwa Mari neVamwe Vanhu